More OIC member states pledge donations for Rohingya
Jan 19, 2017 | English, NEWS |0|
KUALA LUMPUR: Several OIC member states have pledged their contributions today following Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak’s pledge of RM10 million for the Rohingya. Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman said Indonesia and Pakistan have pledged about US$5 million worth of rice, while others have promised to discuss and announce their contributions later. He also stressed that the plight of Rohingya Muslims in Myanmar must not be ignored. “What Malaysia is afraid of is the timeframe. We do not want to sit still and watch things happen and as what we have learned from previous experience in...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်း အခြေအနေတွေက နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့် အရေးအခြေအနေကို သတိထားပြီး မပြတ်စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ဆိုတာ ပြနေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Yang Hee Lee က ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်စဖို့ သုံးရက်အလို ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုထဲမှာ မစ္စယန်ဟီးလီက အဲဒီလို ပြောထားတာပါ။ ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာ ဖြစ်နေတာအပြင် ကချင်နဲ့ရှမ်းဘက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်မြင့်လာတာ၊ အဲဒီကနေ အရပ်သားတွေရဲ့ အခြေ အနေအပေါ် အနုတ်လက္ခဏာဆောင် သက်ရောက်မှုတွေ မလွှဲမရှောင်သာ ဖြစ်လာတာတွေဟာ အစိုးရအဖွဲ့သစ်ရဲ့ ပထမနှစ်အတွင်း သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်စရာတချို့ ဖြစ်လာစေပါတယ်လို့ မစ္စယန်ဟီးလီကပြောပါတယ်။ မစ္စယန်ဟီးလီဟာ ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို လာမှာပါ။ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်ထဲက မြစ်ကြီးနား၊ ဖားကန့်နဲ့ လိုင်ဇာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက စစ်တွေ၊ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်းတောမြို့တွေ အပြင် နေပြည် တော်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွေကိုလည်းသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ လာရောက်မယ့် ၁၂ ရက်ကြာခရီးစဉ် အတွင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရပ်ရွာအကြီးအကဲတွေ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိသလို နိုင်ငံ တကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ် အတွင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ချက်တွေကို အစီရင်ခံစာ ရေးပြီး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လမှာ...
International aid organisations working in Maungdaw Township have not been granted the “flowing” access to the restive region that they were promised, despitea19 December announcement by State Counsellor Aung San Suu Kyi that her government would welcome assistance from international and local relief groups. Humanitarian aid and media access to the area was swiftly clamped shut following deadly9October attacks on police border posts —amove human rights workers predicted would have disastrous implications for the largely stateless Rohingya Muslim community. Suu Kyi, who also serves as Burma’s foreign affairs minister, appeared to bow to...
မြန်မာနိုင်ငံက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို သမားရိုးကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လို ဆက်လုပ်နေပြီး၊ လုပ်ခွင့်ပေးထားပုံရတယ်လို့ အမေရိကန် ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတယောက်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော ခရိုင်ထဲကနယ်ခြားစောင့်စခန်းတွေ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ နယ်မြေရှင်းလင်းစဉ် ကိုးတန်ကောက်ကျေးရွာမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက နိုင့်ထက်စီးနင်းပြုမူနေတဲ့ Video ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့လုပ်ရပ်ဟာ သူတို့လုပ်နေကျ ခွင့်ပြုချက် ရထားတဲ့ လုပ်ရပ်မို့သာ သူတို့ကိုယ်တိုင် Video ရိုက်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး Tom Malinowski က AP သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရတ်က Abu Ghraib အကျဉ်းထောင်မှာ အမေရိကန်စစ်သားတွေ အီရတ် အကျဉ်းသားတွေကို နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြောင့် သင်ခန်းစာရ စရာဖြစ်ခဲ့သလို ကိုးတန်ကောက်ရွာကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ တပ်ဖွဲ့ထဲမှာ ဒီလို အပြုအမူတွေ ကို ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ထင်ကြောင်း Mr. Malinowski ကအေပီသတင်းဌာနကို ပြောတာကို ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာမှာ ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရကတော့ ဒီ Video ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် သက်ဆိုင်သူတွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာလည်း အဲဒီတနေရာမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဖက်က နစ်နာခံစားချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ် ဆိုတာကို မြန်မာအစိုးရကို အမေရိကန်ဖက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ထဲက ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲက AP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဖြေရှင်းရင် ခံစားနေရသူကို ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေက အခွင့်ကောင်းယူပြီး အကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်အောင် လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။...
US Official: In Myanmar Crackdown, Abuses Appear ‘Normal’
Abuses appear “normal and allowed” in Myanmar’s response to an armed uprising by Rohingya Muslims,asenior U.S. official said in an interview, castingapall over one of President Barack Obama’s legacy foreign policy achievements. Obama and his advisers have long held up the former pariah nation’s U.S.-backed shift from military rule asabreakthrough for American interests and democratic values in Southeast Asia. But the situation in strife-hit Rakhine State makes the transition no straightforward success story. Rakhine has been largely closed off to foreigners, including aid workers, sinceadeadly insurgent attack against police in October....